Bogga ugu weyn Ku Ciyaar Kaararka Kaararka Hadiyadaha: 31 Codsi oo shaqeynaya 2021
Waxaan ahay qof qabatimay ciyaarta. Ma aha nooca lacag-luminta, laakiin ballanka-internetka-ku-qabatimay ee raadinaya kuwa ka soo hor jeeda ee mudan in ay koraan muruqyadayda xoqan. Hadda qiyaas sida aan ugu faraxsanahay inaan ogaaday inaan ciyaari karo ciyaaraha kaararka hadiyadda.
Waxaa laga yaabaa inaadan taas ogayn. Hagaag, hadda waxaad ogaan doontaa ilaa 31 barnaamij oo ku siinaya hadiyado lacag caddaan ah oo la iibsan karo si aad u ciyaarto ciyaaraha. In kasta oo abaalmarinta barnaamijyadan laga yaabo inaysan badnayn, haddana, fiiri halka aad ka hesho dakhli dadban ka -nasashada cayaaraha? Tani gabi ahaanba waa super-dope spufic!
Akhriskani wuxuu ku tusi doonaa 31 barnaamijyo yaab leh oo ku siinaya kaararka hadiyadda iyo sida aad u soo furan karto kaararka la sheegay iyo samee xoogaa lacag ah.
Dhanka kale, waxaan haynaa jawaabo gaar ah oo ku saabsan su'aalaha muhiimka ah ee laga yaabo inaad ka qabto barnaamijyada kaarka-kaarka haddaba isla hoose.
Waa kuwee app -ka ugu fiican kaararka hadiyadda ee bilaashka ah?
Barnaamijyada kaarka hadiyadda ee bilaashka ah ee ugu sarreeya ee ugu sarreeya waxaa ka mid ah;
Maxaa La I Siin Lahaa Ciyaaraha Ciyaaraha: Ma Dhabbaa?
Dabcan! Welwelkaaga ku saabsan sababta urur kasta uu lacag kuugu siin doono inaad ku ciyaarto ciyaaraha bilaashka ah ee taleefanka ayaa jira. Aad u ansax ah runtii. Waxaan la yaabanahay inta badan naftayda, in kasta oo aan ka qaybqaatay weynaanta la malaynayo.
Waxaa jira saddex sababood oo caadi ah oo aad lacag ku heli lahayd si aad u ciyaarto ciyaaraha;
Marka hore, meheraduhu waxay lacag siiyaan dadka si ay u soo dejistaan ​​barnaamijyadooda si loo hagaajiyo saldhigooda ciyaartoy iyo si ay ugu guuleystaan ​​dukaanka appka. Maadaama ay jiraan malaayiin codsi oo halkaas ka jira, dadka adiga oo kale ah waxay u baahan yihiin caawimaad si ay u helaan darajooyin sare.
Marka labaad, barnaamijyada bilaashka ah had iyo jeer waxay rabaan dadka inay ciyaaraan si ay "u qabsadaan" ciyaar oo ay u iibsadaan lacagta ku dhex jirta app-ka. Waxay rajeynayaan in santuuqa yar ee aad ka hesho rakibidda barnaamijka ay dib ugu noqon karto jeebkooda. Sida iska cad, sida kaliya ee lagu joojin karo tan ayaa ah inaad seegto dhammaan dalabyada iibsiga!
Sababta ugu dambaysa, sababta ugu cilladaysan - waa khamaarka. Qaar ka mid ah barnaamijyada khamaarka ayaa ku siin doona tigidho bilaash ah oo aad ku ciyaarto si aad lacag ugu guulaysato. Markaa waxay ku siinayaan “wax weyn” oo ah inaad lacag ku bixin doonto tigidho badan oo aad ku ciyaarto. Xalka ugu nabdoon ee barnaamijyadan waa in la aqbalo kaararka bilaashka ah, laakiin waligaa ha bixin wax ay ku siinayaan.
Waa maxay Barnaamijyada Ciyaaraha loogu talagalay Kaararka Hadiyadda sannadka 2021?
Barnaamijyada ku saabsan Android
1. App -ka Maalinta Nasiibka
on Available: macruufka iyo Google Play
Ma jeceshahay ciyaaraha khamaarka laakiin ma jeceshahay dadka badan? Markaas Maalinta Nasiibku waa app adiga kuu ah. Muujinta xoqan, blackjack, iyo waxyaabo kaloo badan oo soo socda, waad ciyaari kartaa si aad ugu guuleysato lacag dhab ah!
Lucky Day waa barnaamij bakhtiyaanasiib ah oo laga soo dejisan karo taleefankaaga casriga ah iyada oo loo marayo Android Google PlayStore ama Apple iOS. Barnaamijku waa u bilaash inuu soo dejiyo oo wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo madadaalo iyo yaab leh oo arka dadka isticmaala inay ku guuleystaan ​​lacag iyo noocyo kale oo walxo ah sida kaararka hadiyadda iyagoo ka qeybgalaya ciyaaraha internetka.
Kadib markii aad soo degsato barnaamijka oo aad isdiiwaangeliso, waxaad xaq u yeelan doontaa inaad gasho bakhtiyaanasiibka si aad ugu istaagto fursad aad ku guuleysato abaalmarino cajiib ah sida lacag, tigidhada bakhtiyaanasiibka, iyo boosaska ciyaarta.
Maalinta nasiibku lacagtaada kuma qaadato qaadashada bakhtiyaa -nasiibka, taas bedelkeeda, waxay kugu abaalmarinaysaa gunno, maalin kasta oo aad ciyaar samayso. Tan iyo markii la aasaasay, barnaamijku wuxuu ku abaalmariyaa xubnaha abaalmarino badan oo la yaab leh oo dejinaya codka barnaamijyada la midka ah si ay u soo baxaan. Maanta, barnaamijyadooda kale ee badan ee la yaabka leh sida Lucky Day.
Wixii intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijyada ku siiya inaad fuliso hawl yar ama aan lahayn, ka eeg boostadayada 22 Barnaamijyada Lacag -Sameynta ugu Fiican ee loogu talagalay taleefankaaga casriga ah ama Aaladda Moobaylka
Soo bandhigaya tartan cusub oo lagu bixinayo safarada raashinkaaga, Nasiib wanaag wuxuu kaloo bixiyaa Lucky Trivia Live, oo ah show aan caadi ahayn oo aad dhagaystayaashu ka qaybqaadan karto oo aad ka guuleysan karto!
App -kan waa inuu noqdaa kan ugu horreeya liiskayaga. Barnaamijku wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo la mid ah Maalinta Nasiibka. Isticmaalayaasha ayaa ku guuleysta abaalmarino la yaab leh iyagoo soo dejinaya oo ku ciyaaraya app -ka.
Marka hore, waxaad ku guuleysataa adiga oo ciyaaraya kaararka xoqista bilaashka ah halkaas oo aad fursad ugu leedahay inaad ku guuleysato abaalmarino cajiib ah. Marka labaad, waxaad ku guuleysataa inaad gasho tartamada isboortiga si aad fursad ugu hesho inaad ku guuleysato abaalmarinno sida lacag caddaan ah oo weyn, safarro madadaalo leh, iyo qaar kaloo badan.
Lucktastic waxay siisaa isticmaaleyaasheeda fursad ay ku guuleystaan ​​abaalmarin weyn oo ah $ 10,000 iyo sidoo kale abaalmarino kale oo calaamad u ah.
Guud ahaan, Nasiibka ayaa leh:
$ 10,000 adiga oo ka qaybgalaya ciyaarta kaarka xoqitaanka ee guusha isla marka aad guulaysato
Ku guuleysto lacag adiga oo gala tartamada bixinta ama tartamada tartanka!
Mawduucyada kaarka xoqidda ee cusub ayaa la siidaayaa maalin kasta oo ay ku jiraan kuwa ugu cadcad sida Maraakiibta Burcad -badeedda iyo Xiddigaha Nasiibka leh
100% Waa bilaash inaad ciyaarto, markaa ciyaar maalin kasta si aad u hesho fursado badan oo aad ku guuleysato!
Lucktastic waxay diiwaangelisay in ka badan 1 milyan oo la soo dejinayo tan iyo markii la aasaasay iyada oo in ka badan $ 3 milyan ay ku guuleysteen oo ay ku furteen lacag caddaan ah xubnaha. Haddaba maxaad sugaysaa? Waxaad noqon kartaa guuleystaha xiga ciyaarta Lucktastic.
Eeg dib -u -eegista nasiib -wanaagga oo dhan iyada oo loo marayo boostadeena Dib -u -eegista Nasiibka leh: Runtii ma ku guuleysan karaa lacag caddaan ah?
3. App xoqan
Barnaamijka 'Scratchy app' waa barnaamij kale oo loo tixgeliyo kuwa raadinaya beddelaad maalin nasiib leh. App -kan wuxuu ku siinayaa fursad aad ku guuleysato qaar ka mid ah alaabada cajiibka ah ee aad jeceshahay inaad haysato. App -kan, waxaad ku guuleysan kartaa walxaha sida kabaha, kaararka hadiyadda, iyo waxyaabo kaloo badan. Waa kan sida loo ciyaaro app Scratchy.
Barnaamijku wuxuu ku siinayaa 6 beerood si aad u xoqdo hadafkaaguna halkan waa inaad xoqdo 3 beerood oo leh astaamo isku mid ah. Ka dib marka la xoqo beeraha, animation otomaatig ah ayaa daaha ka qaadi doonta beeraha qufulan si loo muujiyo si loo muujiyo astaamaha ku jira dhammaan beeraha. Haddii aad nasiib u yeelato inaad la jaanqaado saddex beerood oo leh astaamo isku mid ah, markaa waad guulaysan doontaa.
Sideen u Bixiyaa Abaalmarintayda?
Ku -soo -celintaada ku -guuleysiga barnaamijka Scratchy waa mid aad u fudud, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad sii waddo qaybta Win ee barnaamijka, oo guji badhanka furashada.
Scratchy waa mid ka mid ah barnaamijyada sida maalinta nasiibka dhowr arrimood awgood, barnaamijku waa u bilaash inuu soo dejiyo oo waxaad ku guuleysan doontaa abaalmarino cajiib ah. Booqo goobta si aad wax badan uga ogaato
Soo degso xoqan
Sidoo kale Akhri: AppLike Dib -u -eegid Buuxda: Samee Lacag aad u badan soo dejinta Barnaamijyada
4. Nabar Nasiib leh
Kaarka Lucky Scratch waa barnaamij kale oo leh astaamo la yaab leh sida Maalinta Lucky. Barnaamijku wuxuu siiyaa ciyaartoy leh fursado la yaab leh si loogu abaal mariyo qaabab lacag caddaan ah iyo kaararka hadiyadda.
Si aad ugu guuleysato barnaamijkan, waxa kaliya oo aad u baahan tahay waa inaad soo dejiso oo aad ku rakibto barnaamijka taleefankaaga casriga ah. Waxaad iska qori kartaa adiga oo galaya tafaasiil fudud oo aasaasi ah oo adiga kugu saabsan. Waxaa jira guuleysteyaal badan maalin kasta waxaadna noqon kartaa qofka ku xiga ee ku guuleysta abaalmarinta cajiibka ah ee la soo bandhigay.
Lucky Scratch waa 100% lacag la'aan si loo soo dejiyo oo loo isticmaalo, marka maahan inaad ka cabsato inaad lacag ku weydo kan. Si aad ugu guuleysato barnaamijkan, waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso ka dib soo dejinta iyo diiwaangelinta waa inaad gasho cayaaraha kaarka xoqidda halkaas oo aad ka raadin lahayd inaad ka hesho ciyaaro 3 ama 6 sanduuq si aad ugu guuleysato calaamadaha.
Ciyaartu runtii waa mid xiiso leh in la ciyaaro oo si wanaagsan u abaalmarisa dadka isticmaala. Wax badan ka baro ciyaarta adiga oo booqanaya bogga rasmiga ah. Wixii intaas ka badan oo ku saabsan siyaabaha lacag lagu sameeyo, tixraac boostada cinwaankeedu yahay 35 Sure Waddada loo sameeyo 200 Doolar Maalin kasta
Soo dejiso Scratch Nasiib
Xaqiiqooyinka ku saabsan Vingo
App -ka gabi ahaanba waa bilaash in la soo dejiyo
Lambarada guuleysta waxaa soo saaray nidaamka iswada ee Vingo. (Inta u dhaxaysa 01000 - 30000)
Xaaladaha ay jiraan wax ka badan hal guuleyste, lacagta abaalmarinta ayaa si siman loogu kala qaybiyaa kuwa guuleysta
Xaaladaha aysan jirin guuleysteyaal, lacagta abaalmarinta ayaa si otomaatig ah loogu wareejin doonaa maalinta xigta.
Soo dejiso Vingo
Perk waa app aad u taagan tahay fursad aad ku kasbato abaalmarino la yaab leh, maalin kasta. Si aad ugu guuleysato dhibcaha Perk, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso marka hore - ka soo dejiso barnaamijka dukaanka Google ee qalabkaaga android ama macruufka. Markaa isdiiwaangeli adoo galaya magacaaga, iyo furahaaga sirta ah.
Ka dib geli ciyaarta si aad ugu guuleysato dhibcaha, calaamadaha iyo abaalmarinnada kale ee cajiibka ah ee degdegga ah adiga oo ka qeybgalaya Perk Scratch oo guuleysta. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad soo qaadato kaarka xoqidda si aad u ciyaarto ka dibna waxaad ku beddeshaa guulaha kaararka hadiyadaha, abaalmarinnada, koob -qaadista iyo qaar kaloo badan.
Soo dejiso Perk
Qriket waa barnaamij kale oo la yaab leh oo la soo dejisto haddii aad rabto inaad lacag ku kasbato adoo ka qaybgalaya ciyaaraha. App -ka ayaa gabi ahaanba xor u ah soo dejinta mana jiraan wax iibsi ah oo loo baahan yahay ka hor intaadan adeegsan barnaamijka. Si aad ugu guuleysato Qriket, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ka dib markii aad soo degsato app -ka waa inaad is qorto oo aad bilawdo inaad miiqdo giraangiraha Qriket si aad fursad ugu hesho inaad ku guuleysato abaalmarinno lacageed oo degdeg ah.
Geli bandhig toos ah adiga oo dooranaya midabka buluugga ah ama midabka dahabka ah marka khariidaddu ku dul dhacdo midabkaaga, waxaad u sii gudubtaa heerka ku xiga ilaa abaalmarinta weyn lagu guuleysto.
Waxaad ku biiri kartaa liiska sii kordhaya ee 3 -da milyan ee xubnaha Qriket -ka ah oo horay ugu guuleystay in ka badan $ 2 milyan oo lacag abaalmarin ah. Guuleystayaasha si fudud ayaa looga bixiyaa PayPal.
Soo dejiso Qriket
7. Bakhtiyaa -nasiibka
Kani waa mid ka mid ah barnaamijyada sida maalinta nasiibka leh oo u malayn? Dhilaysiga 100% waa bilaash si loo soo dejiyo oo loo ciyaaro. App -ku wuxuu soo afjarayaa lacag -lumintii tigidhada bakhtiyaa -nasiibka. Barnaamijkan, waxaad ku ciyaari kartaa oo ku guuleysan kartaa bakhtiyaanasiibka lacag la’aan.
Ma jiro wax iibsi gudaha ah oo loo baahan yahay ka hor intaadan bilaabin ciyaarta. App -ka waxaa loo abuuray in lagu madadaaliyo oo lagu abaalmariyo dadka isticmaala. Booqo goobta rasmiga ah si aad u aragto shuruudaha iyo xaaladda looga baahan yahay isticmaaleyaasha oo bilaw u ciyaar si aad u guuleysato.
Soo dejiso Bakhtiyaa -nasiibka
Verydice waa lama huraan: macruufka iyo Google Play
Gundhiggu waa sahlan yahay oo ku filan: waxaad duudduubtaa laadhka dalwaddii, waxaad ku guuleysataa tigidhada ku saleysan waxaad rogto, ka dibna u soo iibso tigidhadaada abaalmarinno! Waxaad haysataa tiro kooban oo duudduuban maalin kasta, waxayna lacagtooda ku helaan iyagoo iibinaya duubis laadhuu oo dheeraad ah.
InboxDollars ayaa laga heli karaa: macruufka iyo Google Play
Ka sokow ahaanshaha goob sahan lacag -bixin ah, Inboxdollars waxay leedahay qayb dhan oo ka mid ah ciyaaraha oo aad ciyaari karto oo lacag lagu siin karo! Asal ahaan, shirkaduhu waxay bixiyaan InboxDollars si ay u helaan dad ay ku cayaaraan cayaartooda, goobtuna lacag yar bay kuu gudbineysaa.
10. Lacag qadaadiic ah
on Available: Google Play
Coin Pop waa barnaamij bilaash ah oo kugu abaalmariya qadaadiic ilbidhiqsi kasta oo aad ka ciyaarto liiskooda. Waxaad ku beddeli kartaa qadaadiicda kaararka hadiyadda ama abaalmarino lacageed.
CashPirate is diyaar ah: Google Play
Barnaamijkan wuxuu bixiyaa habab kala duwan oo lacag lagu helo iyadoo la soo dejinayo barnaamijyo cusub, la dhammaystirayo sahaminta daawashada fiidiyowyada iyo, haa, ciyaaridda cayaaraha.
Bixinta waayo-aragnimo aan lahayn wax kayd ah ama iibsashada-app, Fitplay ayaa halkan u joogtaa inay kugu abaal-mariso isku-dayga ciyaaraha cusub. Kaliya dooro mid ka mid ah liiskooda oo bilow inaad kasbato abaalmarinno.
AppStation wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan oo laga doorto oo lacag lagu siiyo si loogu ciyaaro, sida caadiga ah, ficilka, istiraatiijiyadda, halxiraalaha ama arcade. Ciyaaruhu dhammaantood waa u bilaash in la ciyaaro, abaal -marintana waxaa lagu siiyaa xaddiga waqtiga aad ku qaadato ciyaarta.
14. Macdan qodis
Iyaga oo soo bandhigaya is -dhexgal qurux badan oo isticmaale iyo abaalmarino aad u ballaaran, ilaa iyo wixii ka dambeeya $ 50 lacag bixinta PayPal, Lucky Miner ayaa ku siineysa daqiiqad si aad isugu daydo ciyaaro cusub.
15. Digniinta Lacagta
Alarm Cash wuxuu ku siinayaa inuu ku siiyo kaarkaaga hadiyadeed ee ugu horreeya dhowr saacadood ka dib markaad bilowdo inaad ciyaarto mid ka mid ah cayaartooda, taas oo ah wax weyn oo lagu daray. Adiga iyo saaxiibbadaada waxaad kaloo heli kartaan gunno aad ugu gudbisaan app -ka.
16. Beeraha dahabka ah
Iyada oo leh barnaamijyo cusub oo la soo bandhigo maalin kasta, Beeraha Dahabka ah ayaa ku bixin doona daqiiqadda si aad ugu ciyaarto ciyaaro kala duwan oo mobilada dhammaan noocyada. Guulayso abaalmarino oo lacag bixi maalinta xigta.
17. Ciyaar -xumo
Khalad waaqarsoon on: Google Play
Ku caajisay maktabadda ciyaarta hadda? Mistplay wuxuu siiyaa talooyinka isticmaaleyaasha mobilada talooyin ku saabsan cayaaraha cusub oo xitaa wuxuu kugu abaalmarin doonaa inaad ciyaarto! Barnaamijku wuxuu kaloo leeyahay hawl sheekeysi si uu ula xiriiro ciyaartoy kale!
18. Abaalmarinta Cashout
App -kan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku kasbato dhibco:
Ku rakibidda barnaamijyo lacag la'aan ah
Waxaad sidoo kale heli doontaa 10 dhibcood oo dammaanad leh maalin kasta oo aad gasho. Markaad hesho dhibco kugu filan, waxaad ku soo furan kartaa lacag caddaan ah PayPal iyo kaararka hadiyadda.
Bananatic ah waaqarsoon on: Google Play
Barnaamijkan waxaa si gaar ah loogu sameeyay dadka horay u galay ciyaaraha internetka. Bixinta abaalmarino sida jiirka ciyaarta iyo ciyaaraha fiidiyaha, kan waa kaamil haddii aad adigu tahay khamaare ama aad raadineyso inaad hadiyad u siiso mid noloshaada ah.
Barnaamijyada ku saabsan iPhone
Aaladahaan macruufka ah ayaa ah kuwa ugu fiican ee ku siiya inaad ku ciyaarto ciyaaro.
20. HQ Trivia
on Available: macruufka
Maalin kasta ku ciyaar kedis cusub oo leh ereyada ereyga iyo wax aan macquul ahayn HQ Trivia! Dhab ahaantii waa mid aad loo jecel yahay app si loo ciyaaro wax aan macquul ahayn oo aan ku guuleysto lacag caddaan ah. Barnaamijkan wuxuu lahaa dad caan ah oo marti ah sida The Rock, Robert De Niro, iyo in badan oo hoos-u-dhac ah, haddaba indhahaaga ha fiiqin.
21. Lacagta Caddaanka ah ee Magaalada Toy
App -kan wuxuu qaataa hab xiiso leh oo lagu kasbado lacag caddaan ah adigoo ciyaaraya ciyaaro. Ma jiraan wax-ku-iibsasho ama lacag-ku-iibsasho si loogu guuleysto duruufaha. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ciyaarto cayaarahooda oo aad kasbato tikidhada. Tigidhadu waxay kuu oggolaanayaan inaad gasho mid ka mid ah sawirradooda lacageed ee badan. Haddii aad guulaysato, waxaad lacagta ku siinaysaa PayPal -kaaga. Aad u fudud, sax?
Toluna waaqarsoon on: macruufka iyo Google Play
Kani waa goob sahan oo leh qallooc casri ah oo misig ah, iyada oo ujeeddadeedu tahay in dhallinyaradu ay noqon doonaan "saamayn". Sahannada ka sokow, waxay bixisaa taxane ah ciyaaro u gaar ah oo adeegsadayaashu ku ciyaari karaan oo lagu abaalmarin karo.
23. Swagbucks Live
Swagbucks Live waaqarsoon on: macruufka iyo Google Play
Laga soo bilaabo goobta abaalmarinta tooska ah ee internetka, Swagbucks waxay ka timaadaa ciyaar aan caadi ahayn oo ku kasban karta abaalmarino lacageed! Si dhakhso leh oo sax ah uga jawaab dhammaan su'aalaha si aad ugu qalanto abaalmarin weyn oo ah ilaa $ 500!
24. Ciyaar oo Guulayso
Ciyaar oo guuleysta waaqarsoon on: macruufka iyo Google Play
Bixinta abaalmarin weyn oo ah $ 50,000, Play and Win waa ciyaar aan caadi ahayn oo siisa ciyaartoydeeda ugu aqoonta badan abaalmarino lacageed. Ciyaar cusub ayaa bilaabmaysa saacad kasta, iyadoo ciyaartoydu ay is -horfadhiyaan.
25. Waqti Weyn
Waqti Weyn waaqarsoon on: macruufka iyo Google Play
Laga soo bilaabo Ciyaaraha WINR, Waqtiga Weyn wuxuu bixiyaa lacag dhab ah si loogu ciyaaro cayaarahooda. Lacagta waxaa lagu bixiyaa bakhtiyaa -nasiibka, sidaa darteed tikidhada badan ee aad kasbato ciyaarista, waxay sii fiicnaan doontaa fursadahaaga inaad ku guuleysato weyn!
26. Ciyaar Dheer
Ciyaarta Dheer waaqarsoon on: macruufka iyo Google Play
Kani waa barnaamij bangiyeed oo muujinaya nidaamka abaal -marinta la gamay. Maalin kasta, waxaad u adeegsan kartaa dhibcaha aad kasbatay adeegsiga kaarkooda si aad u ciyaarto oo aad ugu tartanto ilaa hal milyan oo doollar!
27. Erayada Maalka
Erayada Dhaqaalaha waaqarsoon on: macruufka iyo Google Play
Sida xujooyinka? Erayada Hantida waxay leeyihiin hal -ku -dhigyo, maanso iyo xujooyin sheeko oo aad ku ciyaari karto si aad ugu guuleysato 30, 200, xitaa 700 doollar! Barnaamijku wuxuu bixiyaa bixitaan deg deg ah oo aamin ah iyada oo loo marayo PayPal si loogu guuleysto.
28. Dagaalkii Maskaxda
Brain Battle waxay siisaa ciyaartoy fursad ay ku kasbadaan tikidhada iyagoo ciyaaraya. Hal tigidh ayaa ah waxa kaliya ee loo baahan yahay in lagu galo si loogu guuleysto abaalmarino lacageed. Waxaa intaa dheer, in badan oo dadku ciyaaraan, abaalmarinta ayaa sii weynaan doonta.
Appnana waaqarsoon on: macruufka iyo Google Play
App -ka ayaa sheegaya inay bixisay in ka badan $ 10 milyan xubnaheeda sanadihii la soo dhaafay. Waxaad ciyaareysaa ciyaaro ay ku siiyaan, markaa waxaad ku soo ceshan kartaa abaalmarintaada kaararka hadiyadda meelaha sida:
30. Ciyaartii Abaalmarinta
Ciyaartii Abaalmarinta waaqarsoon on: Google Play
Barnaamijkan, adiga ciyaaro free games laga soo bilaabo raaxada guriga. Waa app-ka-joogsiga ah dhammaan cayaaraha caadiga ah ee aad jeceshahay inaad ciyaarto. Dooro abaalmarintaada iyo hel kaararka hadiyadda lacag la'aanta ah 48 saacadood gudahood!
Ma jeceshahay Solitaire, Mahjong, Wheel of Fortune, Yahtzee iyo ciyaaro kale oo la mid ah? Ciyaar ciyaaro bilaash ah oo kasbado dhibco marka aad bilowdo ciyaarista, gaarto heerar gaar ah, fiirso fiidiyowyo abaalmarin ah oo aad ku iibsato gudaha-app. Ciyaar cayaaro caan ah oo aad hore u taqaanay oo aad jeceshahay!
Ka xulo kaararka hadiyadda ee Best Buy, kaararka hadiyadda ee Amazon, kaararka hadiyadda ee Bartilmaameedka iyo inbadan! Kuwani waa qaar ka mid ah abaalmarinnada waaweyn ee aad heli karto intaad ku raaxaysato ciyaaraha Ciyaarta Abaalmarinta leh. Kaararka hadiyadaha ayaa la sheegay inay ku yimaadaan 48 saacadood gudahood marka aad dooratid abaalmarintaada, markaa maahan inaad sugto!
31. Abaalmarinta Kubadda Cagta
Abaalmarinta Kubadda Cagta waaqarsoon on: Google Play
Taageerayaasha kubbadda cagta ee Pro waxay kasban karaan 100% koofiyado bilaash ah, funaanado, kabo, kaararka hadiyadda iyo in ka badan, oo leh boqolaal shey oo ay ka doortaan. Dhammaan abaalmarintu waa 100% bilaash, oo ay ku jiraan dhoofintu. Abaalmarinta waxaa kafaala qaata soosaarayaasha ciyaarta marka aad rakibto, cayaarto oo aad ku kharash garayso cayaarahooda.
Ku kasbato abaalmarino dhab ah adiga oo ciyaaraya ciyaaro aad jeceshahay! Ciyaar ciyaaro sida Yahtzee, Wheel of Fortune, Ereyada Xumbo. Ka hel kaararka hadiyadda ee Amazon, kaararka hadiyadda Target, iyo abaalmarino dheeraad ah dukaamada iyo goobaha aad jeceshahay. Hel abaalmarino ama qalabka NFL adoo kasbanaya dhibcaha ciyaarta dhexdeeda kuna beddel kaararka hadiyadda iyo qalabka kubbadda cagta kooxda aad dooratay.
Ka hel qalabka NFL kooxaha aad jeceshahay kaliya adoo ku ciyaaraya taleefankaaga ciyaaro xiiso leh! Mid kasta oo ka mid ah kooxda NFL ee aad jeceshahay - way dabooleen.
Ugu dambayntii, waxaan taas ku odhanayaa, maya 'fikrad lacageed' aad bay u yar tahay in la tijaabiyo. Waxa aad u arki karto fikrad lacageed oo aan muhiim ahayn, qof leh duruufo kula mid ah, ama laga yaabee xitaa kuwa ugu xun, ayaa laga yaabaa inay ka ganacsadaan hal milyan oo doollar.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan si xoog leh kugula talinayaa inaad xooga saarto maalgelinta dakhli badan oo aad waqtigaaga firaaqada ah u isticmaasho fikradaha dakhligoodu yar yahay adigoo u ciyaaraya kaararka hadiyadaha.
Wax kasta oo go'aankaaga ah, Waxaan kuu rajaynaynaa kaliya waxa ugu fiican.
Ku farax inaad ku biirto lacag caqli badan horyaal!
22 Barnaamijyada Lacag -Sameynta ugu Fiican ee loogu talagalay taleefankaaga casriga ah ama Aaladda Moobaylka
11 Siyaabood oo Aan La Furin Oo Lacag Laga Helo Dukaanka Google Play 2021
25 Shaqooyinka & Barnaamijyada Dhaqaalaha Gig ee ugu Fiican 2021 | Hagaha Bilowga
Samee Lacag Khadka Tooska ah ee Alaabada Google sanadka 2021
20 Hustles Side -bixinta Lacagta Badan ee Jarmalka Hada waad Bilaabi kartaa
Waayadan dambe, dhaqanka ah in uu qofku is-jiid-jiidhiyo ayaa soo shaac baxay. Dadka intiisa badan ayaa hadda eegaya meelo ka baxsan…
9 Siyaabood oo Aan La Filaynin Oo Lacag Lagaga Sameeyo Twitter -ka 2022 -ka
Qofna uma badna inuu dhaho "maya" ilo dakhli kale gaar ahaan marka aysan aad u adkeyd in la sameeyo...
Helitaanka amaah ama kaarka deynta waa adag tahay haddii aadan lahayn credit ama credit xun. Xataa haddii…
21 Shabakado Sharci ah oo Wax Lagu Iibiyo Gudaha | Daawo Kuwo Cusub
Waxaan xasuusan karaa Janaayo 2019, waqtiga aan rabnay inaan ka guurno Manitoba una guurno Ontaariyo, waxaan helnay…
20 Barnaamijyada Sahanka ee bixiya Kaararka Lacagta & Hadiyadda sanadka 2021
Haddii aad raadineyso codsiyada sahanka ugu fiican ee lacag bixinta, markaa waxaad timid meel aad u fiican. Waa inaad leedahay…
Bilyaneeradu waa qayb ka mid ah dadka adduunka. Sida laga soo xigtay Forbes, waxaa jira ilaa 2,075 bilyaneer oo ku nool…